Barnaamijyada Moobilada: Maxaa Loo Dhisayaa, Maxaa Loo Dhisayaa, Sida Loo Dhiiri Galiyo | Martech Zone
Barnaamijyada Mobilada: Maxaa Loo Dhisayaa, Maxaa Loo Dhisayaa, Sida Loo Dhiiri Galiyo
Jimco, Juun 24, 2015 Khamiis, Juun 23, 2015 Douglas Karr
Waxaan aragnay ganacsiyada ku guuleysta barnaamijyada moobiilka iyo ganacsiyada kale oo runtii halgama. Guusha intiisa badani waxay ahayd qiimaha ama madadaalada barnaamijka moobiilku uu keenay hogaanka ama macaamilka. Muhiim u ahayd barnaamijyadan halganka badan waxay ahaayeen khibrad isticmaale xumo, iibsi xad dhaaf ah, qiime aad u yarna u leh isticmaalaha. Waxaan sidoo kale aragnay barnaamijyo moobillo aan caadi aheyn oo la soo saaray laakiin aan weligood la aqbalin dadaallada xayeysiinta oo daciif ah awgood.
Horumarinta dalabka moobiilku wuxuu kusii socdaa hoos u dhaca qiimaha maaddaama shirkado aad iyo aad u tiro badani ay si wax ku ool ah u dhiseen qaab-dhismeedyo iyo barnaamijyo moobilka loogu talagalay Taasi dhab ahaantii waxay soo bandhigtay dhibaatooyin badan oo xagga warshadaha ah illaa hadda qof walbaa wuxuu daabacayaa barnaamijyo. Dhibaatadu waxay tahay in lacag ku filan aan lagu isticmaalin tijaabinta isticmaalaha, khibrada isticmaale iyo kor u qaadista… taas oo run ahaantii ka dhigaysa ama jabineysa guusha barnaamijka moobiilka.
Wali waa ganacsi mudan in la maalgashado, waa inaad heshaa la-hawlgalayaasha saxda ah. Barnaamijyada moobiilka waxay hagaajin karaan daacadnimada ganacsiga waxayna kobcin karaan iibkaaga. Tusaale ahaan, waxaan u dhignay codsi beddelaad fudud shirkad kiimiko ah oo ka caawisay macaamiishooda inay sameeyaan xisaabinta beddelaad sax ah iyagoon dib ugu laaban miiskooda. Iyo, dabcan, barnaamijku wuxuu lahaa muuqaal guji-u-yeeris u suurta geliyay iyaga inay u yeeraan macmiilkeenna si ay u caawiyaan ama ay u sameeyaan amar.
18% ka mid ah 500 ee tafaariiqleyda ugu badan ee Boqortooyada Midowday iyo in ka badan 50% ee Mareykanka ayaa macaamiisha u fidiya barnaamij macaamil ganacsi. Iyada oo kalabar adeegsadayaasha moobiilku ay u jeestaan ​​barnaamijyada si ay u gaaraan go'aannada wax iibsiga, magacyadu waa inay waqti ku qaataan barashada baahiyaha macaamiisha ayna abuuraan khibrado barnaamij oo si toos ah u daboolaya baahida macaamiisha Laakiin kahor intaadan bilaabin barnaamijkaaga weyn ee xiga, waxaa jira qodobo muhiim ah oo maskaxda lagu hayo.
Waxyaabaha Muhiimka ah ee laga qaadan karo macluumaadka ugu dambeeyay ee Usablenet:
Saddex meelood meel ka mid ah dadka isticmaala barnaamijyada moobiilku waxay tirtiraan barnaamijyada maxaa yeelay waxay lumiyeen xiisihii
30% adeegsadayaasha mobilada isticmaala ayaa mar labaad isticmaali doona barnaamij haddii ay bixiso qiimo dhimis
2/3 meelood oo dadka isticmaala warbaahinta moobiilka adduunka oo dhan waxay tixgelinayaan daahfurnaanta inay aad muhiim u tahay
54% millennials-ka adduunka ayaa leh khibrad moobiil oo liidata ayaa ka dhigaysa mid aan u badnayn inay u isticmaalaan alaabada kale ee ganacsiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan qaabeynta istiraatiijiyad istiraatiijiyad moobil oo ku habboon bilaashka 'Usablenet' Tilmaamaha barnaamijyada moobiilka.
Tags: app mobilekorsashada barnaamijka moobiilkawaayo-aragnimo app mobileIsticmaalka barnaamijka moobiilkaisticmaalka moobaylka
Waa maxay Wadahadalka Taagta Daran ee Kuu Kordhinaya?
Furaha Xakamaynta Nooca Calaamaddaadu waa Shakhsiyeyn